Fanolorana ny “Undertones”, gazetin’ny Global Voices andalinana ireo media · Global Voices teny Malagasy
Fanolorana ny “Undertones”, gazetin'ny Global Voices andalinana ireo media
Manampy hahatakatra ireo fitantaràna ao anatin'ny rohivohary misahotaky ny media
MpanoratraCivic Media Observatory
Voadika ny 24 Novambra 2021 2:36 GMT
Fahatakarana ny fahasarotana
Mba hahatakarana feno ireo tranga sy fironana — ohatra, fifidianana iray mampifanditra na sary mahatsikaiky iray vaovao — dia ilaintsika ny mamaky ny eny anelanelan'ireo andalana.
Eto indrindra no idiran'ny Civic Media Observatory. Mitily ireo fitantaràna fototra ho an'ireo tombontsoam-bahoaka maika izahay, amin'ny fitrandrahana ifotony ny toedraharaha manodidina sy ny zanadahatsoratr'ireo media avy any an-toerana, amin'ny fiteny mahazatra sy fiteny maro.
Inona marina no ambaran'ny olona?
Ity gazety ity no hanampy anao hahatakatra ireo tsy fitoviana — ny undertones (ireo feo iva / bitsibitsika) — anatin'ny rohivoarin'ny media toa misaritaka.
Anatin'ny gazety tsirairay, hitsonga tranga iray izahay, fironana iray mipongatra na tantara iray sarobahàna. Ho an'ireo mpankafy mikira angondrakitra, manome varavarana misokatra ihany koa ny Undertones hankanesana any amin'ireo fehezan-drakitra natao ho an'ny daholobe izay manohana ny asa fanarahamaso ataonay.
Tato anatin'ny taona roa farany, ny Civic Media Observatory dia nitrandraka ireo fahasarotana anatin'ny rohivoarin'ny media tany amina firenena efa ho roapolo mahery, nandinika lohahevitra toy ny fifidianana ka hatramin'ny COVID-19, ny hetsipanoherana ka hatramin'ny ady an-trano, momba ny dindon'ny hery malefak'i Shina manerana izao tontolo izao ka hatramin'ireo tetikady ataon'ireo tsy refesi-mandidy mba handisoana ny vaovao. Manampahaizana manokana amin'ny famakiana sy fanazavana ireny tsy fitovian'ny tantara, fironana ary fitantaràna misy any amin'ny fireneny ireny ireo mpikaroka ato amin'ny Global Voices. Izahay dia mampiditra tsy tapaka lohahevi-pikarohana vaovao, fehezan-drakitra ho an'ny daholobe ary fandalinana, izay azonao jerena ao amin'ny pejy fandraisan'ny Observatory. Ireo tetikasa amperiny ho an'ny taona 2021 sy ny fiandohan'ny 2022 dia ahitàna ireo fanarahamaso ny ao Afghanistàna, Bangladesh, India, Mali, Myanmar, Nikaragoà, Pakistàna, Rosia ary Tiorkia.
Jereo ato ny fanontàna voalohany [mg] ny Undertones, izay nafantoka amin'i Nikaragoà. Tongasoa ianao!
Misorata hahazo ny Undertones
Undertones dia gazety atontan'ny Civic Media Observatory, fiarahamiasa mavitrik'ireo mpikaroka ao amin'ny Observatory sy ireo toniandahatsoratra mpandrindra ary ireo mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny tetikasa. Fantaro bebe kokoa ny iraka tontosainay, ny fomba fiasa, ary ireo angondrakitra natao ho azon'ny daholobe tsidihana.
Oseania1 herinandro izay
'Raha te-hahazo podcast mahasambatra ianao, fantaro i Abbie, ilay ankizivavy namorona ny @HerwayMagazine. 11 taona izy ary avo fikendry!'